Mogadishu Journal » Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in xayiraad lagu sameeyay maanta
Mjournal :-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay si ula kac ah maanta isku dayday in ay baajiso Safar maanta ay ku tageen Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu sheegay in saacado kooban lagu xayiray Garoonka Muqdisho, islamarkaana dowlada dhexe ee Soomaaliya ay ka dambeysay falkaasi.
Waxaa uu sheegay in Mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay ku dhibaateyeen Garoonka diyaaraddaha Muqdisho.
Dowladda ayuu sheegay in ay marmar siyo ka dhigatay in Garoonka Beledweyne ay biyo fadhiisteen laakiin taasi ay been tahay maanta ay markii ay tageen ay ka degaayeen Diyaarado Xamuul ah.
Shacabka Soomaaliyeed ayuu ku baaqay Midnimo iyo Wadajir, maadaama uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay weerar ku tahay qof walb